April 17, 2021 - ApannPyay Media
နုပျိုချင်ရင် နေ့တိုင်း ဒါလေးတွေ လုပ်ပေးပါ
April 17, 2021 by ApannPyay Media
နုပျိုချင်ရင် နေ့တိုင်း ဒါလေးတွေ လုပ်ပေးပါ ရုပ်မလှရင် နေပါစေ။ နုပျိုအောင်သာ နေပါ။ အသားအရေတင်းတင်းရင်းရင်း စိုပြေပြီး ဝင်းလက်နေရင် ရုပ်ချောတာထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ အသက်ကြီးလေလေ ပိုသိလေလေ ဖြစ်မှာပါ။ နုပျိုစိုပြေဖို့ဆိုတာ သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ နေ့တိုင်း ဒါလေးတွေ လုပ်ပေးရင် ရုပ်လည်းနုပျို အရွယ်လည်း ပိုတင်လာမှာပါ။ (၁) အားရပါးရပြုံးပါ မျက်နှာတည်တဲ့သူတွေဟာ ရုပ်ရင့်လွယ်ပါတယ်။ အားရပါးရ ပြုံးတဲ့သူတွေဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို သူတို့ရုပ်အဆင်းကလည်း နူးညံ့ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို နုပျိုသွားတာ လက်တွေ့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပြုံးပြုံးနေ ၊ စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါ။ (၂) ဒါလေးတွေ စားပါ စပျစ် ၊ ဘယ်ရီ ၊ ဇီးသီး ၊ သစ်တော်သီးတွေက အသားအရေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို အသီးတွေမှာ ပါတဲ့ … Read more
နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပါ (ဗဟုသုတဖြစ်ဖတ်ကြည့် )
နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပါ (ဗဟုသုတဖြစ်ဖတ်ကြည့် ) နွားကို အမဲသားလို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးပါ…ဘာကြောင့် နွားသားကို အမဲသားလို့ခေါ်ကြသလဲ….အသားစားသတ္တဝါထဲ၌တွင်..သရဲ.သဘ္ဘက်ဘီလူး. ကျား.ခြင်္သေ့..တခြားသောမကောင်းဆိုးဝါးမိစ်ဆာများမှာ…အသားထဲ၌..နွားသားကိုသာ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။နွားသား၏ အနံ့မှာလဲအညှီဆုံးဖြစ်သလို..နွားသားစားခြင်းကြောင့်လဲ. သွေးသားအားကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကြက်သေတော့.ကြက်သား… ဝက်သေတော့ဝက်သားလို့ခေါ်ကြသည်မှာအမှန်တိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း..နွားသေတဲ့အသားကျတော့..အမဲသားဟူ၍.ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.ထူးဆန်းလှသည်ဖြစ်သည့်အပြင်.ဘာကြောင့်အဲဒီလိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို.မသိသူကများပါသည်…..အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ..မကောင်းသော.အမှောင်လောကသားတို့သာကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်.စားကြသည်.မက်မောကြသည်ဖြစ်၍.သာမှန်လူသားသားတို့အနေနဲ့..ဖြူစင်သန့်ရှင်းသောအသားမဟုတ်ပါကြောင်းကိုဆိုသည် မသန့်ရှင်းဟုဆိုသည်မှာ..ရွံစရာကောင်းအောင်ညစ်ပတ်နေတာကိုပြောသည်မဟုတ်ပါ… အကုသိုလ်တွေဖုံးလွှမ်းပေကျံနေသောကြောင့်..မကောင်းဆိုးဝါးများသာ.နှစ်သက်သောကြောင့်..မသန့်ရှင်းမဖြူစင်ဘူးဟုဆိုပါသည်….အမှောင်လောကသားတို့.ပရလောကသားတို့..ကုသိုလ်နှစ်အကုသိုလ်ကို.မသိနားမလည် မခွဲခြားတတ်သော.မလုပ်နိုင်သောသူတို့သာ စားမက်ဖွယ်ရာဟုသတ်မှတ်ထားသောအသားဖြစ်၍အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်…..ထို့သို့..အမဲသားကို.ကြိုက်နှစ်သက်သောစားသောက်ကြသော.သာမှန်လူသားတို့၌တွင်..ထိုသူတို့၏.ခန္တာတွင်လဲ.အင်မတန်.ညစ်နွမ်းခြင်းအနံ့သက်.အညှီနံများစွဲနေလေ၏.မိမိကိုယ်မိမိမသိသော်လည်း..အထက်မှာဖော်ပြထားသည့်..အမဲသားကို.မက်မောနှစ်သက်စွာ.ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပေရေလာကသားမ်ား.. ကျားရဲတိရိစ္ဆာန်များ..အစိမ်းသေ.သရဲ.သဘ္ဘက်.ဘီလူးများမှ ထိုအသား၏အနံ့ကို.ယဉ်ပါးနေပြီဖြစ်၍ထိုအသားကိုစားသောက်ထားသည့်. သာမန်လူသားများကို.အလွယ်တကူသိရှိကြ၏အလွယ်တကူ အနံ့ရ၏။ ထိုအနံ့ရရှိသောလူသားတို့ကိုလဲ…ထိုမိစ္ဆာတို့က..အမဲသားကိုကြိုက်နှစ်သက်မက်မောသလို..ထိုအသားစားထားသောလူသားတို့ကိုလဲ..မက်မောကြ၏..ကြိုက်နှစ်သက်ကြ၏..သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအနံ့အစားသောက်သည်..မည့်သည့်လူ.မည့်သည့်နေရာ၌ရှိသည်ကိုအလွယ်တကူသိကြ၏…ထိုအသားကိုစားသုံးသော.လူသားတို့၌လဲ..ထိုမိစ်ဆာအပေါင်းက.မားတဲ့သူများထက်…လွယ်စွာတိုက်ခိုက်ဖြတ်စည်းနိုင်၏…ထိုအသားကိုစားသုံးသောသူတို့မှာလဲ..ကံနိုပ်.ဉာဏ်နိပ်၏..ထိုကြောင့်ပင်..ဤနွားသား.ခေါ် အမဲသားကို..သူတော်ကောင်းတို့လောကီပညာရှင်တို့ တရားအားထုပ်သော.အရိယာသူတော်စင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ရှောင်ကျဉ်၍.မစားကြပေ..အာဆိပ်.လျှာဆိပ်.ညံ့သည်…ဩဇာအာဏာစက်ညံ့သည်..ပြောဆိုသမျှ.ကြံစည်သမျှ.ပျက်စည်းစေတတ်သည်…လဒ်ပိတ်တတ်သည်….ထိုကြောင့်ဖြစ်ပါ၍..သူတော်ကောင်းများအနေဖြင့်..မစားကြပါနဲ့လို့ပြောဆိုအမိန့်ပေးခွင့်..ပိတ်ပင်တားစီးခွင့်မရှိပါသောကြောင့်…မိမိ၏.ကိုယ်ပိုင်.အသိဉာဏ်လေးဖြင့်.ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍.သတိတရားများရှိကြပါစေ.. Writer ;Happy and Lucky Source ; AyeMyaThu ႏြားကို အမဲသားလို႔ ေခၚရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေလးပါ (ဗဟုသုတျဖစ္ဖတ္ၾကည့္ ) ႏြားကို အမဲသားလို႔ ေခၚရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေလးပါ…ဘာေၾကာင့္ ႏြားသားကို အမဲသားလို႔ေခၚၾကသလဲ….အသားစားသတၱဝါထဲ၌တြင္..သရဲ.သဘၻက္ဘီလူး. က်ား.ျခေသၤ့..တျခားေသာမေကာင္းဆိုးဝါးမိစ္ဆာမ်ားမွာ…အသားထဲ၌..ႏြားသားကိုသာ အႀကိဳက္ဆုံးျဖစ္သည္။ႏြားသား၏ အနံ႔မွာလဲအညႇီဆုံးျဖစ္သလို..ႏြားသားစားျခင္းေၾကာင့္လဲ. ေသြးသားအားေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကက္ေသေတာ့.ၾကက္သား… ဝက္ေသေတာ့ဝက္သားလို႔ေခၚၾကသည္မွာအမွန္တိုင္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း..ႏြားေသတဲ့အသားက်ေတာ့..အမဲသားဟူ၍.ေခၚေဝၚျခင္းမွာ.ထူးဆန္းလွသည္ျဖစ္သည့္အျပင္.ဘာေၾကာင့္အဲဒီလိုေခၚေဝၚျခင္းကို.မသိသူကမ်ားပါသည္…..အမဲသားဟုေခၚေဝၚျခင္းမွာ..မေကာင္းေသာ.အေမွာင္ေလာကသားတို႔သာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္.စားၾကသည္.မက္ေမာၾကသည္ျဖစ္၍.သာမွန္လူသားသားတို႔အေနနဲ႔..ျဖဴစင္သန႔္ရွင္းေသာအသားမဟုတ္ပါေၾကာင္းကိုဆိုသည္ မသန႔္ရွင္းဟုဆိုသည္မွာ..႐ြံစရာေကာင္းေအာင္ညစ္ပတ္ေနတာကိုေျပာသည္မဟုတ္ပါ… … Read more
ကြက်ဥကို နေ့တိုင်း ပုံမှန် စားသုံးတဲ့အခါမှာ ကြုံတွေ့လာရမယ့် ထူးခြားမှုများ
ကြက်ဥကို နေ့တိုင်း ပုံမှန် စားသုံးတဲ့အခါမှာ ကြုံတွေ့လာရမယ့် ထူးခြားမှုများ လူအများစုက ကိုယ်နဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေရဲ့ အဖိုးတန်မှုကို လွယ်လွယ်နဲ့ မြင်လေ့ မရှိကြပါဘူး။ ကြက်ဥလို အမြဲ ကိုယ့်နားမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ စားစရာမျိုးက ပေါပေါပဲပဲ ရတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုနေတဲ့ အချက်တွေကတော့ အံ့သြလောက်စရာတွေ ရှိနေတာပါ။ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ရပြီး အမြဲ မြင်တွေ့နေတာကြောင့် သတိမထားမိတတ်ကြတဲ့ ကြက်ဥရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိနေပြီး ကြက်ဥကို နေ့တိုင်းသာ မှန်မှန်လေး စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုပါ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတယ် ကြက်ဥမှာ အသားဓာတ်နဲ့ အဆီဓာတ်တွေက မျှတစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကြက်ဥကို နေ့တိုင်းသာ စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ဗိုက်ပြည့်စေတာမျိုး ဖြစ်စေသလို … Read more
မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ( ဖတ်ထားသင့်တယ်နော် )
မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ( ဖတ်ထားသင့်တယ်နော် ) မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ဖတ်ထားသင့်တယ်နော် ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ဖတ်ဖို့မအားရင် Share ပြီး သိမ်းထားပါ။သိသူကျော်သွားပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် …. အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ “ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ….. ၁။ မီးဖို အား စလောင်းဖုံးအုပ်ခြင်း ၂။ အိမ် ထောင်ဦးစီး လင်ယောကျင်္ားအား နိမ့်ကျသော နေရာတွင်ထားခြင်း ၃။ မိမိ ဇနီးသည်အား ညာဘက်တွင် အိပ်စေခြင်း ၄။ စားသောက်သော အိုးခွက်ပန်းကန်များအား လွှင့်ပြစ်ခြင်း ၅။ ထမင်း ဟင်း ချက်ရင်း … Read more
ခါးနာတဲ့ရောဂါဝေဒနာကို လုံးဝ အကင်းအရှင်း ပျောက်ကင်းစေတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးနည်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ခါးနာ တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထိုင်များခြင်း အိပ်ဆက္ပုံ မမှန်ခြင်း နဲ့ တစ်ခြားဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကြောင့်လည်း ခါးနာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခါးနာ ရောဂါက တကယ္ကို ဆိုးရွားသလို ခါးကိုက်ပြီးဆိုရင် ခါးနာတဲ့ရောဂါဝေဒနာကို လုံးဝ အကင်းအရှင်း ပျောက်ကင်းစေတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးနည်း ဘယ်လောက်ခံရခက်တယ်ဆိုတာ ဝေဒနာခံစားရတဲ့ သူတွေ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခါးနာရောဂါခံစားရပြီ ဆိုတာနဲ့ သေချာ ကုသသင့်သလို နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းကို ဆိုးရွားတဲ့ သေချာ ကုသဖို့ အတွက်ဆေးနည်းကောင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်တိုင်းဆေးပညာတွေ ထက်ပိုပြီးတော့ အစွမ်းထက်ပြီး ရှေးယခင် ကတည်းက အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ ခါးနာ သက်သာပျောက် ကင်းစေတဲ့ ဆေးနည်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးချင် … Read more
ခါးကြောညပ်တယ်ဆိုတာ “ခါးနာတာကြာပြီ၊ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူး၊ ခါးကြောညပ်နေတာထင်တယ်” ဒီစကားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူကြီးသူမတွေမကြာခဏပြောလေ့ရှိကြတာကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆေးတွေသောက်လည်းမသက်သာလို့ ညည်းနေတတ်တာတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သူတို့ပြောတဲ့ခါးကြောညပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါလဲ? ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင် ကျောရိုးကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျောရိုးဟာ တခြားအရိုးတွေလိုတစ်ချောင်းထဲတစ်ဆက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ လည်ပင်းကနေမြီးညောင့်ရိုးအထိ အရိုးတုံးလေး ၃၃ ခုကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ဒီအရိုးတုံးတွေရဲ့ကြားမှာ အဆစ်တစ်ခုစီ ရှိကြပါတယ်။ ကျောရိုးမကြီးရဲ့အထဲမှာတော့ spinal cord လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ဆက်စပ်ထားတဲ့အာရုံကြောမကြီးတခုရှိပါတယ်။ ခြေထောက်တွေလက်တွေနဲ့အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်မှာရှိတဲ့အာရုံကြောလေးတွေကကျောရိုးဆစ်တွေကြားကနေ တဆင့်အာရုံကြောမကြီးဆီရောက်ရှိပြီး အဲ့ဒီကမှတဆင့် ဦးနောက်နဲ့ဆက်သွယ်ကြတာပါ။ ဒီလိုအာရုံကြောလေးတွေ ဝင်ထွက်ရာကျောရိုးဆစ်တွေမှာ ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါအာရုံကြောတွေကို ဖိထားသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ခါးမှာရှိတဲ့အာရုံကြောတွေ ဖိမိနေတာကို ခါးကြောညပ်တယ် လို့ခေါ်ကြတာပါ။ ခါးကြောညပ်တာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ၁။ ခါးရိုးအတက်ထွက်ခြင်း (သို့) ခါးအရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်ခြင်း ၂။ ခါးရိုး ယိုယွင်းပျက်ဆီးခြင်း ၃။ ခါးအရိုးပြားကျွံခြင်း ၄။ ခါးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ၅။ ခါးရိုးတီဘီရောဂါဖြစ်ခြင်း ၆။ ခါးရိုးကင်ဆာ … Read more
အသားအရေသာမက ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြုတဲ့ ယုဇနပန်းလှလှလေး
အသားအရေသာမက ကိုယ်တွင်းကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြုတဲ့ ယုဇနပန်းလှလှလေး ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ရေးသားသူ Aye Thi Mon ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မေ 28, 2020 ယုဇနပန်း လှလှလေး ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အဆင်အသွေးလည်းလှ၊ ရနံလေးလည်း သင်းပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ယုဇနပန်းလေးတွေကို နေအိမ်မှ အလှစိုက် ထားလေ့ရှိကြတယ်နော်။ ယုဇနပန်းလေးရဲ့ အနံ့ မွှေးမွှေးလေးက ရာသီဥတု အေးအေးလေးမှာဆို သင်းသင်းလေးနဲ့ စိတ်ထဲတော်တော်လေး ကြည်နူးစရာ ကောင်းစေပါတယ်။ ဒီ ပန်းလှလှလေးက ကျန်းမရေးကို ဘယ်လိုများ အားဖြည့်ပေးသလဲ……… ယုဇနပန်း နဲ့ ကျန်းမာရေး အပွင့်ဖြူဖြူ အဝါရောင် ဝတ်ဆံ အနံ့ မွှေးမွှေးလေးတွေရှိတဲ့ ယုဇနပန်းလေးက အသားအရေ … Read more
နွေမှာ မန်ကျည်းဖျော်ရည်လုပ်သောက်ရင်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်မယ်
နွေမှာ မန်ကျည်းဖျော်ရည်လုပ်သောက်ရင်း ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်မယ် မန်ကျည်းသီးသည် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် အဆစ်အမျက်ရောင်ရောဂါတို့ကို သက်သာစေနိုင်သည့်အပြင် သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆိပ်သင့့်ခြင်းကို ပြယ်စေသည့် အာနိသင်များလည်းရှိပါသည်။ မီးဖိုချောင်တွင် မပါမဖြစ် မန်ကျည်သီးမှည့်သည် ဝမ်းအတွက် အကောင်းဆုံးအာဟာရတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမက ဆေးဖက်လည်းဝင်ပါသည်။ ညအိပ်ယာမဝင်မီအချိန်၌ ထန်းလျက်နှင့် ဆားအနည်းငယ်ပါဝင်သည့် မန်ကျည်းဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကို သောက်ပါက ဝမ်းမှန်စေပါသည်။ သို့ရာတွင် မန်ကျည်းသီးကို သွေးပေါင်ကျစေရန်အတွက် သောက်သုံးရာတွင် ဆားထည့်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ မန်ကျည်းသီးကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ပြုလုပ်စားသောက်လျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုသော မီးဖိုချောင်သုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါသည်။ Tamarind Fruit. Dr . Khin Maung Lwin – FAME ေႏြမွာ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္လုပ္ေသာက္ရင္း က်န္းမာေရးဂရုစိုက္မယ္ မန္က်ည္းသီးသည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ အဆစ္အမ်က္ေရာင္ေရာဂါတို႔ကို သက္သာေစနိုင္သည့္အျပင္ … Read more
အိပ်ရာမဝင်ခင်ခြေဆေးယုံနဲ့ ရောဂါ‌တွေပျောက်ရုံတင်မက အခြားရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
အိပ်ရာမဝင်ခင်ခြေဆေးယုံနဲ့ ရောဂါ‌တွေပျောက်ရုံတင်မက အခြားရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ယနေ့ မှစ၍ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ခြေထောက်ဆေးအိပ်ဖို့မမေ့ရန်သတိပေး ပါ့မယ်…ဘာ့ကြောင့်လဲ….. ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ခြေဆေးခြင်းကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေက ၁။ တစ်နေကုန်အောင်းနေသောအပူများ အောက်သို့လှည့်ပြီးခြေဖဝါးမှထွက်သွားနိုင်သည်။ ၂။ ညအိပ်ပျော်နေချိန် ဟောက်ခြင်းသွားကြိတ်ခြင်း၊ လျှာဝါးခြင်းသွားရည်ကျခြင်းများ သက်သာ စေသည်။ ၃။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ငယ်ထိပ်ပြောင်ခြင်းမှ သက်သာစေသည်။ ၄။ အပူကြောင့် သွားဖုံးကြွခြင်း၊ သွားနာသွားကိုက်ခြင်းများမှ သက်သာစေသည်။ ၅။ ဆံပင်ဖြူခြင်းကို သက်သာစေသည်။ ၆။ ရင်ညွှန့်သို့တက်သောလေဘဝင်သို့တက်သောလေ၊ နှလုံးသို့တက်သော လေပူတို့ကို သက်သာစေသည်။ ၇။ ခြေထောက်ကို သန့်စင်စွာဆေးပြီးအိပ်ခြင်းကြောင့် မကောင်းသော အိပ်မက်ဆိုးများမက်ခြင်းမှ သက်သာစေနိုင်သည်။ ၈။ ကျွတ်သောဆံပင်ကို ပြန်ပေါက်စေနိုင်သည်။ ၉။ ခြေသလုံးနှစ်ဖက် ကြွက်တက်ခြင်းမှ သက်သာစေသည်။ ၁၀။ နံနက်အိပ်ရာထတွင် မျက်ဝတ်များထွက်ခြင်းမျက်စိဖွင့်မကောင်းခြင်းမှ သက်သာစေသည်။ ၁၁။ … Read more
ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ ​အသုံးပြုနေသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သူများအတွ သတိပြုဖွယ်် အချက်
ကာဘော်လစ် ဆပ်ပြာ ​အသုံးပြုနေသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သူများအတွ သတိပြုဖွယ်် အချက် ကာဘော််လစ် နှင့် မျက်နှာသစ်ဖြစ်နေသူများအတွက်် သတိပြုဖွယ်် အပီီအပြင် ငြင်းနေကြလိို့ ချက်ကျ လက်ကျပဲပြောပါမယ် ကာဘော််လစ် ဆပ်ပြာကို မျက်နှာလုံးဝမတိုက်ပါနဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာအသားရည် ကိိုယ်တန်ဖိုး ထားရင်ပေါ့ တိိုက်နေတဲ့သူတွေလဲ လာမငြင်းပါနဲ့ဆက်တိုက်ပါ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာမှာ ကာဘော်လစ်အက်စစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်မျက်နှာအသားရည်ကိုပျက်ဆီးစေရုံသာမက မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်စေပါတယ် carbolic အက်စစ်က နုနယ်တဲ့မျက်နှာအသားရည်ကိို အက်စစ်ဓာတ်သဘောအရ စားပစ်လိိုက်လို့စသုံးသုံးပီး ၁ လ ၂ လလောက်ထိ မျက်နှာက ဖြူ လာပီး ok သယောင် ဖြစ်နေပါလ်ိမ့်မယ်် အဲ့နောက်ပိုင်း Normal skin သမားတွေ တိုက်ရင် အရည်ပြားပါးလာပီး sensitive skin အဖြစ်သို့တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲသွားပါမယ် dry skin သမားတွွေ ပိုပီး … Read more
“သေဆုံးသူတွေရဲ့ Deadbody တွေကို ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အသက်၁၃နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး ထွန်းလင်းနိုင်”